Mascuud Ozil oo dadka danyarta ee ku nool Soomaaliya ugu deeqay raashin lagu Af-furinayo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mascuud Ozil oo dadka danyarta ee ku nool Soomaaliya ugu deeqay raashin...
Mascuud Ozil oo dadka danyarta ee ku nool Soomaaliya ugu deeqay raashin lagu Af-furinayo
Mascuud Ozil ayaa sheegay in u afurin doono 16,000 qof oo Muslimiin ah bisha Ramadaan, kuwaas oo ka kooban 2,000 qoys oo Suuriyaan iyo Turkish ah.
Dhanka kale Laacibkan ayaa 90,000 ayaa dadka Soomaaliya ee Dan yarta ah ugu deeqda cunto Af-fur ah, taasi oo lagu qaybin doono magaalada Muqdisho, lacagta ka baxaysa oo caddadkeedu garage £80,000 uu gacanta ka saaray Hay’adda Bisha Cas ee dalka Turkiga.
Madaxa Bisha Cas ee Turkiga ayaa wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa waddankaas u sheegay in sannadka oo dhan ay quudiyaan dadka baahan, isagoo uga mahaceliyay muxsiniinta sadaqada ugu tabaruca dadka danyarta bish Ramadaan.
Kerem Kinik ayaa sheegay in u mahadcelinyo dadka isku hawlay in ay la qaybsadaan walaalhooda af-furka bisha Ramadaan ayna ku garab istagyaan kuwa u baahan 365-ka kalmaada.
Xiddigan caalamiga ah ee xulka qaranka Germany oo asal ahaan kasoo jeeda Turkey, waxa sannadkii uu sadaqo ku bixiyaa lacag lagu qiyaasay £2 Ozil ayaa dhowaan iska diiday inuu ogolaado in Arsenal ay mushaharkiisa ka jarto lacag dhan 12.5 boqolkiiba oo ay ciyaartoyda kale ee kooxdu ogolaadeen, hase yeeshee waxa muuqata in lacagtiisa uu u adeegsanayo bixiinta kalmaada dadka u baahan in loogu tabaruuco ee Diinta Islaamku jidaysay oo uu Allah ugu dhowaanayo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Xoojineysa ololaha wacyigelinta ka hortaga Covid-19
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo guddoomiyay Shirka guddiga qaran ee ka hor tagga Covid-19